IRidge Cottage, iBinna Burra Lamington National Park - I-Airbnb
IRidge Cottage, iBinna Burra Lamington National Park
Indlu eyenziwe ngomhlaba sinombuki zindwendwe onguDave
Ukuba uyakuthanda ukubalekela kwindalo kwaye ujonge indawo yoxolo kunye nokuba wedwa, kwindawo eyodwa, ke iRidge Cottage yeyona ndawo uya kuyo. Yindlu eyakhiwe ngesandla, eyakhiwe ngezinto ezininzi ezihlaziyiweyo kwaye inophahla lwesamente ye-ferro. Indlu yangasese yokwenza umgquba kunye neshawari eshushu zikwigumbi elahlukileyo kwiveranda. Ngaphezulu kwe-100km yeendlela zokuhamba zimalunga ne-3km nje ukuya phezulu kwindlela kwindawo yaseBinna Burra eLamington National Park. Ngokwenene ngamava anobubele.
Ukuzonwabisa, ukuzola, umlingo, i-surreal. Amagama nje ambalwa asetyenziswe ziindwendwe zamva nje ukuchaza i-cottage. Oko samkele iindwendwe zethu zokuqala ngo-2018, sifumene abaninzi abafuni kuya naphi xa befika. Kukho into malunga nokuntywila kwindalo, kwisakhiwo esikhethekileyo esibekwe kumhlaba, ekuvumela ukuba uthobe kwaye ube nolwazi ngolonwabo olulula ebomini.
Unemfihlo epheleleyo njengoko kungekho bamelwane (ngaphandle kwezilwanyana zasendle ezikwiihektare ezingama-22 000 zepaki yeSizwe) kwaye abamkeli bakho bahlala kwindlu enkulu ekungeneni kwipropati. Ufikelela kwi-cottage ngendlela yakho yabucala.
Iisofa ezitofotofo, i-hammock kwiveranda kunye nokujonga kwiNtlambo yaseNuminbah engezantsi, kukunceda ulibale ukuphithizela kobomi kwaye ikuvumela ukuba ucime, uphumle kwaye uphumle.
Kukho umatshini wekofu we-breville ukwenza i-espresso yakho yasekuseni (izisa umxube wekofu owuthandayo) ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo ukupheka isaqhwithi, i-tv, istiriyo kunye nokhetho lweencwadi kunye nemidlalo yebhodi ukugcina ukonwabisa.
Ukungqongwa yiPaki yeSizwe kuthetha ukuba kukho izilwanyana zasendle ezininzi kule ndawo. Ihlathi elivulekileyo le-eucalypt likhaya leentlobo ezininzi zeentaka, izilwanyana ezirhubuluzayo, iiwallabies kunye neekoala.
4.99 · Izimvo eziyi-213
Iindawo ezibukekayo ezikufutshane.
Ngaphandle kweLamington National Park, i-cottage ikwakhona kufutshane nethafa elihle laseBeechmont, apho unokubhukisha khona ukukhwela ihashe okanye ukuphulula umzimba okanye uchithe intsasa ukonwabela iimbono ezintle zeentaba. Indlu yeTea eBinna Burra kunye neFlying Bean Cafe eBeechmont ziindawo ezintle zesidlo sakusasa okanye sasemini. Unokude ubhukishe i-tandem ejingayo okanye ibhabhathane leparagliding xa iimeko zilungile, ukubona lo mhlaba umangalisayo usemoyeni.
I-Mt Tamborine yi-40min yokuqhuba ukuya emantla ukusuka kwi-cottage, apho unokukhetha ukuhamba ngeendlela ezimbalwa kwiindawo zePaki yeSizwe okanye uhlolisise iigalari ezininzi, iikhefi kunye neevenkile kwiGalari Walk. Kukwakho ne-treetop walk kunye ne-wineries.
I-Canungra yeyona dolophu ikufutshane, nje i-20min drive, kwindlela eya kwi-Mt Tamborine. Yidolophu ethandekayo yelizwe eneendawo zokutyela ezininzi, igalari yobugcisa kunye nevenkile yeencwadi kunye nehotele yaseCanungra. Le yeyona dolophu ikufutshane kwipetroli kunye nevenkile enkulu.
I-Springbrook yintaba elandelayo esempuma ye-Beechmont kwaye inohambo lokuhamba onokukhetha kulo ukuquka ii-Purlingbrook Falls kunye nohambo olufutshane ukuya kwi-Best of All Lookout, eyi-1000m ngaphezu komphakamo wolwandle. Kwenza uhambo olulungileyo losuku olupheleleyo.
Wonke umsebenzi wobugcisa kwiNkosana ngumamkeli wakho, umzobi wendawo, uDave Groom. Kufutshane neRidge Cottage yiDave Groom Studio Gallery, evuleleke kuluntu. Igalari ivulwa ngokubanzi phakathi kwe-10am - 4pm. Nceda uqhagamshelane noDave ukulungiselela ixesha lokutyelela.
I-Ridge Cottage ijolise kwiindwendwe ezijonge indawo yokuhlala yabucala, ezolileyo kwindawo epholileyo. Nje ukuba uqinisekise ukubhukisha kwakho, uDave umamkeli wakho uya kukuthumela iinkcukacha ezibandakanya izalathiso kunye neengcebiso zokuba ukonwabele ukuhlala kwakho. Ukuba uDave usekhaya uya kudibana nawe ekufikeni ukuze akuncede uzinze, ngaphandle koko uya kukunika indawo ephambili ukuze ukwazi ukuzijonga. UDave ufumaneka ngokubanzi nangona ufuna nantoni na.
I-Ridge Cottage ijolise kwiindwendwe ezijonge indawo yokuhlala yabucala, ezolileyo kwindawo epholileyo. Nje ukuba uqinisekise ukubhukisha kwakho, uDave umamkeli wakho uya kukuthume…